आज पनि सन्दीपको खेल, को–को छन् दुवै टिममा स्टार खेलाडी ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज पनि सन्दीपको खेल, को–को छन् दुवै टिममा स्टार खेलाडी ?
काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध लाहोर कलन्दर्सले पाकिस्तान सुपर लिगमा आफ्नो सातौं खेलमा आज कराँची किंग्ससँग खेल्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजेदेखि शुरु हुनेछ ।
लाहोरले अहिलेसम्म ६ खेलमा ३ मा हार र ३ मा जित निकालेको छ । यस्तै, कराँची भने ६ खेलमा ४ मा हार र २ मा मात्र जित निकाल्दै अंक तालिकाको पुछारमा छ । छैटौं खेलमा क्वेटा ग्लाडियटर्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै आत्मविश्वास बढाएको लाहोर आज पनि आफ्नो जित यात्रा कायम गर्न चाहन्छ ।
याे पनि पढ्नुस पीएसएलः सन्दीपको बलिङ करियरकै उत्कृष्ट, आज कस्तो रहला?
यस्तै, कराँची पनि आजको खेल जित्दै पुछारबाट माथि उठ्न मैदान उत्रिदै छ । लाहोरमा नियमित कप्तान घाइते भएका कारण फकर जमान छन् । यस्तै, कराँचीको नेतृत्व इमाद वासिमले सम्हालि रहेका छन् ।
कराँचीमा को–को छन् नाम चलेका खेलाडी?
टिम कराँचीः बाबर आजम, रवि भुपारा, बेन डुक, कोलिन इनग्राम, इमाद वासिम (कप्तान), कोलिन मुनरो, सोहिल खान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, लैम लिभिङ स्टोन लगायत छन् ।
लाहोरमा को–को छन् स्टार खेलाडी?
लाहोर टोलीः एवि डी विलियर्स, कोरी एण्डरसन, सन्दीप लामिछाने, फकर जमान (कप्तान), सोहिल अख्तर, शाहिन शाह अफ्रीदी, यासिर शाह, हरिश सोहेल, गौहार अलि, डेभिड वाइस र हरिश रौफ